Global Voices teny Malagasy » Tsy ampy ny mpitsabo zaza ao Romania, mitsangana ny saina menan’ny faharatsian’ny rafi-pitsaboana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Aogositra 2018 5:50 GMT 1	 · Mpanoratra Nevena Borisova Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Bolgaria, Romania, Fahasalamàna, Fampandrosoana, Mediam-bahoaka, Sendikà
Endrika mahazatra amantarana ny hopitaly jeneraly romaniana. Ity iray ity izao miorina ao an-tanànan'i Roman, any atsinanan'ny firenena. Saripikan'i Andrei Stroe, via Wikipedia, CC BY 3.0.
Hatramin'ny nidirany ho ao amin'ny Vondrona Eoropeana (EU) tamin'ny taona 2007, mitolona amin'ny fifindra-monina goavana  misy eo amin'ireo mpitsabo i Romania, ary ny fitsaboana ankizy no mampisy fahabangana indrindra amin'ny tsy fahampian'ny olona.
Araka ny antontakevitry (lahatahiry) ny Ivotoerana Romaniana misahana ny Antontanisa tamin'ny taona 2017 sy 2016, tamin'ny taona 2015 vao nisy fitomboana ny isan'ny dokotera ao amin'ny firenena . Ny ankamaroan'ireo tsy maniry ny ho tapaka karama na miasa amin'ny fitaovana tsizarizary any amin'ny toeram-pitsaboana ambanivohitra. Aleon-dry zareo miasa any amin'ny tanàna lehibe na mijery tolotr'asa maro miasa any andafin'ny firenena.
Romania no manana ny fandaniana ambany indrindra isan'olona  ao amin'ny Vondrona Eoropeana, raha ny azy no ambony indrindra amin'ny taham-pahafatesan'ny zaza . Arahin'i Boligaria,  izay nanatevin-daharana ny Vondrona Eoropeana tamin'ny taona 2007 ihany koa ary miatrika fironana tahaka izany eo amin'ny fandosiran'ny olona tokony hiasa, ity firenena ity eo amin'ireo tarehimarika anankiroa ireo.
Tamin'ny taona 2016, eo ho eo amin'ny 10 isaky ny zaza teraka miisa 1000 eo ny isan'ny zaza maty eo am-piterahana ao Romania — fihenana goavana izany  raha mitaha amin'ny fahafatesana 15 isaky ny zaza 1000 teraka voarakitra tamin'ny taona 2003, saingy mbola ambony noho ny taha ankapoben'ny 3,7 isaky ny zaza teraka ao amin'ny Vondrona Eoropeana izany.
Nanoratra tao amin'ny tranonkalany  i Ioana Moldovan, mpaka sary fanao an-gazety fanadihadiana izay nitatitra ny tsy fahampian'ny pediàtira, tamin'ny herintaona:
Efa ho 20 tapitrisa ny isan'ny mponina ao Romania. Latsaka atsasany noho ny isan'ny dokotera an-tanandehibe ny isan'ny dokotera ambanivohitra, raha miaina any ambanivohitra ny atsasaky ny mponina. Iharan'ny krizy hatrany ny sehatry ny fitsaboana ary tsy mety tapitra ny olana. Tao anatin'ny 27 taona hatramin'ny revolisiona antikomonista tamin'ny taona 1989, farafahakeliny 25 ny isan'ny minisitry ny fahasalamana nifandimby. Tsy nisy tamin'ireo no niezaka mba hahazoan'ny tsaboina fikarakarana araka ny lasitra tandrefana.
Tamin'ny fanambaràna iray natao tao amin'ny Global Voices, manaiky ny Dr. Constantin Giosanu, pediàtira sady mpandrindra ny Orina Mpanasoa IMED , fa mahazo fanohanana ara-bola avy amin'ny governemanta ny ankamaroan'ny hopitalim-panjakana ao Romania, saingy:
…tsy betsaka araka ny tokony ilaina iasana, tara ny fahatongavany ary indraindray ampiasain'ny mpitantana ireny hopitaly ireny tsy araka ny tokony ho izy.
Ary mba haharatsy kokoa ny toe-draharaha, dia miaritra amin'ny fahavitsiana indrindra amin'ny isan'ny mpanampy mpitsabo  sy ny mpampivelona  isan'olona ao Eoropa i Romania. Matetika izy ireny no miasa any amin'ny hopitaly tsy misy fitaovana sy fanafody tsotra indrindra, ary tsy afaka ny omena fikarakarana manokana ny tsaboina raha tsy ny marary no mitondra ny fitaovana sy ny fanafody.
Ny toe-javatra mampisy rarintsaina sy ny fahambanian'ny karama no mahatonga ny fahazarana mahita kolikoly any amin'ny hopitalim-panjakana. Fantatra ny marary fa nanome vola na “fanomezana” hafa  ho an'ny dokotera na mpanampy mpitsabo mba hahazoany ny fikarakarana ilain-dry zareo iavotan-tena.
Tamin'ny taona 2016, mpitsabo homamiadana miisa 77 ao amin'ny firenena no voampanga ho manao kolikoly tamin'ny fanoratana fanafody natokana ho an'ny homamiadana ho an'ny marary ho takalon'ny fiantohana vakansy any India, araka ny fanadihadiana  nataon'ny OpenDemocracy.
Pediàtira iray ho an'olona 200.000
Dokotera miisa 361 ihany no misy ao an-tanànan'i Tulcea , izay manana mponina mihoatra ny 70.000, izay mametraka azy ho any akaikin'ny gisitra ao Romania amin'ny isan'ny dokotera isam-batan'olona.
Tamin'ny aogositra 2016, ray aman-dreny ampolony no nikarakara fihetsiketseham-panoherana  manoloana ny faharatsian'ny sampana fitsaboana zaza tanteraka ao amin'ny hopitalin-dry zareo. Mikarakara olona 200.000 eo ho eo, avy ao Tulcea sy ireo tanàna kely manodidina, iray ihany ny isan'ny pediàtira ao amin'ny hopitaly, ary mikatona ny sampana isaky ny tsy miasa io mpitsabo zaza io.
Tamin'ny taona 2017, efa ho herintaona no nikatonan'ny sampana noho ny tsy fisian'ny dokotera za-draharaha ny amin'izany. Tamin'ny faran'ny taona 2018, nampidirana pediàtira ihany tao ary nisokatra indray ny sampana, saingy noho ny maha-tokana ny spesialista ao amin'ny ekipa, tsy maintsy miandry mandritra ny ora maro ihany ny fianakaviana hikarakarana ny zanany.
Tamin'ny taona 2017 ihany, nanambara tsy fahampian'ny dokotera amin'ny sampana fitsaboana rehetra ny hopitaly. Toerana 33 no banga tamin'izany fotoana izany, saingy tsy nisy na dia iray aza ny liana hiditra.
Nanoritsoritra ny toe-draharaha tamin'ny ZF media  i Tudor Năstăsescu, mpitantana ny hopitaly ao Tulcea:
Mitovy tanteraka amin'ny toeran-kafa eto amin'ny firenena ny toe-draharaha…Mikarakara fifaninanana izanay, ary miezaka ny ho tsara fitondra-tena amin'ireo olona tonga, mba tsy hampisy rarin-tsaina fanampiny ho azy ireo. Manolotra ny ho karaman-dry zareo izahay, saingy tsy miraharaha intsony ry zareo. Na izaho aza maharay tolotra hiasa any andafy isam-bolana.
Mitovy amin'izany ihany ny toe-draharaha any amin'ny kaominina hafa toa an'i Calarasi , Giurgiu, ary Ialomita . Mandritra izany fotoana izany, mihoatra ny 12.500 na ny 22 isanjaton'ny dokotera rehetra ao amin'ny firenena no miasa ao an-tanànan'i Bucharest renivohitra.
Misy tantara mitovy amin'izany ihany koa mitranga ao amin'ny Hopitaly Monisipalin'i Drăgăşani any amin'ny kaominin'i Valcea , andrefan'ny firenena, rehefa tsy maintsy nanakatona ny sampana pediatirìka  (fitsaboana zaza) tao aminy ry zareo tamin'ny Jolay 2017 rehefa naka fialan-tsasatra nandritra ny tapa-bolana ny pediàtira tokana tao amin'ny hopitaly. Ahiana ho tafahitsoka tanteraka ny tanànan'i Drăgăşani raha misy ny voina tampoka satria roa monja ny isan'ny fiara fitondrana marary ao amin'ny fokonolona.
Ahoana ny ahafahan'i Romania mahita lalana ivoahana amin'ity krizy ity? Manankevitra ny Dr. Giosanu:
Mihevitra aho fa anjaran'ny dokotera sy ny gazety no manabe [mandritra ny fotoana maharitra] ny mponina sy ny marary hitsahatra amin'ny fanekena kolikoly, fitantanam-pahasalamana ratsy, servisim-pahasalamana ratsy. Amin'izay fomba izany dia hivoatra hitovy amin'ny any Eoropa Andrefana ny rafitra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/14/124586/
 fifindra-monina goavana: https://widerimage.reuters.com/story/rgomanias-healthcare-exodus
 tamin'ny taona 2015 vao nisy fitomboana ny isan'ny dokotera ao amin'ny firenena: https://www.romania-insider.com/number-doctors-romania-2017/
 taham-pahafatesan'ny zaza: http://business-review.eu/featured/romania-has-highest-infant-mortality-rate-in-europe-84496
 fihenana goavana izany: https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ro&v=29
 Nanoratra tao amin'ny tranonkalany: http://ioanamoldovan.com/portfolio/a-country-doctor-and-her-calling/
 Orina Mpanasoa IMED: http://www.imed.foundation/despre-noi.php
 mpanampy mpitsabo: https://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Romania
 fa nanome vola na “fanomezana” hafa: https://medium.com/romania-corruption-watch/romanias-fraudulent-healthcare-system-483236de78cc
 Giurgiu, : https://en.wikipedia.org/wiki/Giurgiu
 sampana pediatirìka: http://www.gazetavalceana.ro/2017/07/21/revoltator-sectia-pediatrie-din-spitalul-dragasani-inchisa-cadrele-medicale-in-concediu-pacientii-trambalati-in-alte-parti/